ဇူးရစ်နှင့်ဘေဆယ်ဘို့လေဆိပ်လွန်း - သီးသန့်နှင့်အဆင်ပြေ
အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ရောက်လာရန်အချိန်ပေါ် - သင့်ပရီမီယံ Service ကိုမှလွှဲပြောင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ယာဉ်မောင်းရုံးကနေဒါမှမဟုတ်လေဆိပ်တံခါးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးမြင့်၏တဦးတည်းအိမ်ကနေကောင်းကောင်းထားရှိမည်ဂျာမန် Sedan နှင့်အတူသငျသညျကောက်ပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, ကျွန်တော်အိတ်နှင့်အတူကူညီနိုင်သည်။ အချို့နှောင့်နှေးနှင့်သင်၏လေယာဉ်မြေယာသင့်ကျနော်တို့၏သင်တန်း, မချ, သငျသညျကွကုနျအံ့, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ဆိုက်ရောက်ဘို့စောင့်ဆိုင်းနေ။
တိုက်ရိုက်ရထားလမ်းနှစ်ခု node များအကြားတိုက်ရိုက်တလျှောက်ဦးတည်သွားစေပါဘူးဘို့ငါတို့ခရီးသည်အတော်များများ, ဇူးရစ်လေဆိပ်နှင့်ယူရိုလေဆိပ်ဘေဆယ်ကြားရှိလေဆိပ်လွန်းဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ။ တစ်ဦးမသက်မသာဘတ်စ်ကားခရီးစဉ်သို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်ကယ်ဖို့အလွန်အမင်းကြီးလွန်းတက္ကစီစီးနင်း, ငါတို့လေဆိပ်လွန်းများအတွက်ရွေးချယ်မှုညာဘက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ က 70 ၌အကြှနျုပျတို့၏သီးသန့် limousine အတွက်စတုဂတ်သို့မဟုတ်မြူးနစ်တိုက်ရိုက်ပယ်ရှား Freiburg ကီလိုမီတာသွားပါသို့မဟုတ်လျှင်ပြင်သစ်, ဆွစ်ဇာလန်နှင့်ဂျာမနီတို့အကြားနယ်စပ်တြိဂံအတွက်ဘေဆယ်၌အကြှနျုပျတို့၏ရုံးကတဆင့်, ငါတို့သည်လည်းသင်တို့အဘို့, လက်ျာဖက်ဖြစ်ကြသည်။
လေဆိပ်လွန်းဇူးရစ်နှင့်ဘေဆယ် - Tel: + 41 78 861 35 50
သငျသညျအရေးပါသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစည်းအဝေးတစ်ဦးချင်းအဖြစ်ခရီးသွားလာ? ထိုအခါသင်ကချောချောမွေ့မွေ့စီး, တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသော On-အချိန်ဆိုက်ရောက်အပေါ်အားကိုးနိုင်ပြီး၏သင်တန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ 100% သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစဉ်အတွင်းသမ္မာသတိပိုင်ဆိုင်သည်။ တစ်မိသားစုသို့မဟုတ်အုပ်စုတစ်စုအဖြစ်သင်ကျိန်းသေကျွန်တော်တို့ရဲ့လှပသောဆွစ်ဇာလန်မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေဆိပ်လွန်းနှင့်အတူအဆင်ပြေစီးနင်းခံစားနိုငျဘယ်မှာရှိနိုင်ပါကျယ်ဝန်းပွင့်လင်း limousines, ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ drivers တွေကိုတတ်နိုင်သမျှသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်အဖြစ်သာယာသောစေရန်အဓိကအားလုံခြုံမှုနှင့်အချိန်မှန်နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့၌သင်တို့၏ခရီးသွားရက်စွဲများနဲ့သတင်းအချက်အလက်ကျွန်တော်တို့ကိုစွန့်ခွာ ကျေးဇူးပြု. ထိတှေ့ကျနော်တို့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဆွေးနွေးရန်သငျနှငျ့အတူအဆက်အသွယ်အမြန်ဆုံးသကဲ့သို့သင်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။ ဖုန်းကိုသူတို့ + 41 78 861 35 50 မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်
မှတ်သား: ဘေဆယ် လေဆိပ်ကြိုပို့ Limousine service ကို Zuerich
taxi.flughafen ဇန်နဝါရီလ 23, 2017 ဇန်နဝါရီလ 23, 2017 Uncategorized မှတ်ချက်များကိုအဘယ်သူမျှမ
← လေဆိပ်ဘေဆယ်လွှဲပြောင်း - ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံခရီးသွားအဆင်ပြေ
ဘေဆယ်အတွက်ဟိုတယ်ဧည့်သည်များအဘို့လွှဲပြောင်းဝန်ဆောင်မှု° 360 →